नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : प्रहरीले बुधबार साँझ ५ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पाँच हजार २७ जनाको भूकम्पमा मृत्यु, ७ हजार ४ सय ५८ जना घाइते !
प्रहरीले बुधबार साँझ ५ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पाँच हजार २७ जनाको भूकम्पमा मृत्यु, ७ हजार ४ सय ५८ जना घाइते !
भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या पाँच हजार नाघेको छ। नेपाल प्रहरीले बुधबार साँझ ५ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पाँच हजार २७ जनाको भूकम्पमा मृत्यु भएको छ। ७ हजार ४ सय ५८ जना भूकम्पमा घाइते भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट एक हजार ४ सय ५९ जनाको शब भेटिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ४ सय ३८ घाइते छन्। उनीहरुको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भैरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।